Shirka SKAL Talyaaniga: Dalxiis 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Shirka SKAL Talyaaniga: Dalxiis 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sida dib loogu bilaabo dalxiiska toddobaadyada iyo bilaha iyo xitaa sannadaha soo socdaa kuma lug yeelan doonaan oo keliya dhinacyada jireed ee socdaalka iyo dalxiiska, sida tallaallada, tijaabooyinka, iyo dukumiintiyada, laakiin sidoo kale dhinacyada nafsiga iyo bulshada.
Madaxweyne kuxigeenka Skal Roma wuxuu yiri waa inaan joojino fikirka ah in wax walba ay kusoo laaban doonaan sidii hore.
Ma awoodi karno inaan kala soo baxno carada aan ka qabno cadow la taaban karo, waa inaan raadino habab kale oo aan wax uga qabano culeyska ka dhashay faafida.
Komishanka Yurub wuxuu ku qiyaasey halista luminta 6 milyan oo shaqo.
Seminaarka ugu horreeya ee 2021 ee Skal Academy ee Rome, wuxuu ku saabsan yahay mawduuca: Dalxiis ee 2021 - sida dib loogu bilaabo: dhinacyada nafsiga iyo bulshada.
Tito Livio Mongelli, Madaxweyne ku xigeenka Skal Roma ahna madaxa Akadeemiyada oo soo bandhigi doona shaqooyinka isla markaana hagaya aqoon isweydaarsiga, wuxuu hoosta ka xariiqay sida “waa in aan joojino fikirka ah in wax walba ay ku laaban doonaan sidii hore, maxaa yeelay mar dambe isku mid ma noqon doonno: qaar ka mid ah waxyaabaha aan mudnaanta siinayno, iyo waliba sida aan u shaqeyno ayaa isbedelaysa.
Mustaqbalka, "waa inaan tixgelinaa inaan dhamaanteen dareemeyno nugul, aduunku wuu yaraan doonaa markaan ka fikirno xawaaraha faafida cudurada, laakiin masaafada waxay umuuqan doontaa mid aad u weyn markaan go'aansano halka aan aadayo fasax."
Prof. Filippo Zagarella, oo ku takhasusay cilmu-nafsiga iyo teraabiyada cilminafsiga, wuxuu diiradda saaray: “meertada xun ee aan ku dhacayno: ma garanayo sida looga fal-celiyo halista aan la arkin; waxaan ku jirnaa walwal joogto ah oo na niyad jabiya, waana kasii darayaa marba marka ka dambeysa. Khatarta jirta awgeed, waxaan si toos ah u dareemeynaa rafaad, cabsi, iyo xanaaq.
Ma awoodno inaan rarka ka qaadno cadowgeena la taaban karo, waa inaan raadino dariiqooyin kale oo looga baxsado: in aan diidno halista ama aan wax kale u aragno cadow ama aan caburinno shucuurteenna ama aan uga sii darno sharciyada lagula dagaallamayo cadowgan aan muuqan.
“Si kastaba ha noqotee, waxaan ku nool nahay culeys joogto ah, diiqadana waxay wax u dhimaysaa difaaca jirkeena waxayna sidoo kale naga dhigeysaa inaan si xun jir ahaan u dareemno Maaha in la sheego khatarta sii kordheysa ee jirrada si hufan oo ka timaadda cudurka jiritaankiisu culeys nagu hayo.
Prof. Filippo Zagarella waxa uu soo jeedinayaa “qaadashada qaabka 4C: ogaanshaha, ka warqabka, tababarrada doorarka cusub, iyo aqbalaadda isbeddelka.
Abuur “baxsaddeena cajiibka ah” si aad u yarayso culeyska fekerka: aan maskaxdeena gelino fasax iyo, sida ugu dhakhsaha badan, sidoo kale jirkeena! Waxaan u baahan doonaa ciidaha, sida ugu dhakhsaha badan!
Prof. Matteo Colleoni, oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda UniBicocca University Milan, oo ku saabsan cawaaqib xumada aafada ee baahida guud iyo dhaqdhaqaaqa dalxiiska iyo isbeddelada dhacaya, wuxuu iftiimiyay sida "dalxiisku u yahay mid adag" waaxda bey'ada iyo nidaamka "oo ay ku jiraan dhowr jilaayaal ah ( wax soo saareyaasha, qeybiyeyaasha, macaamiisha, iyo taageerooyinka), sidaa darteed, in badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha ayaa daciif ah, qeyb ahaan, ama si xoogan ula xiriira nidaamka dalxiiska: in ka badan toban milyan oo shaqaale ah oo Yurub jooga ayaa ku jira ganacsigan.
Adduunyada, 2-dii sano ee la soo dhaafay, qulqulka muhaajiriinta caalamiga ah ayaa in ka badan laban laabmay waana qulqulka inta badan ku socdaalaya waddooyinka (72% Yurub iyo 59% Talyaaniga), in kasta oo qiimaha muhiimka ah ee safarka cirka ee ganacsiga dalxiis iyo fasaxyo dhaadheer.
Cawaaqibta aafada ka jirta gobolada Yurub qaarkood, ku tiirsanaanta sare ee dhaqaalaha maxalliga ah ee waaxda dalxiiska, tusaale ahaan, Talyaaniga waxaan uga hadlaynaa Valle d'Aosta, Trentino iyo Alto Adige, Liguria, Sardinia, Tuscany, Umbria, iyo Marche, ayaa iyaga ka dhigtay kuwo aad ugu nugul naxdinta au-par ee daryeelka caafimaadka.
Sida laga soo xigtay Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC), saameynta adduunka ee dhibaatada masiibada dhanka dalxiiska 5 jeer ayuu ka liitaa kii sanadkii 2008 dhibaatada dhaqaale ee adduunka.
Komishanka Yurub wuxuu ku qiyaasayaa halista luminta 6 milyan oo shaqo oo saameyn xoog leh ku leh shaqaalaha xilliyada, dhalinyarada, haweenka, iyo ajaanibta, kuwaas oo durbaba daciif ku ah shaqada.
Socodka dhaqdhaqaaqa dalxiisku wuxuu si xoog leh ula xiriiraa qulqulka qulqulka: dalxiisku waa isla waqtigaas sababta (marka la eego faafitaanka) iyo cawaaqibta (xaaladaha sii xumaanaya) ee faafitaanka fayraska.
Marka loo eego natiijooyinka sahaminta kaladuwan ee doorashooyinka dhaqdhaqaaqa dalxiiska, yareynta halista ayaa noqotay qodobka koowaad ee xulashada habka gaadiidka.
Maxay yihiin siyaasadaha iyo faragelinta suurtagalka ah ee maaraynta dhibaatada aafada ee nidaamka dalxiiska?
In kor loo qaado adeegsiga siyaasadaha hadda la adeegsanayo (iyo heerkooda is-dhexgalka); hago oo wax ka beddelo doorbidyada la xidhiidha hab-dhaqanka dalxiiska iyo isticmaalkiisa; kordhinta adkeysiga nidaamka iyada oo loo marayo waxqabadyada kaladuwanaanta; iyo in la kordhiyo heerarka xakamaynta halista (wax ka qabadka qaabdhismeedka iyo tignoolajiyada).
Waxqabadyada isdhexgalka aaladaha qorshaynta ee loogu talagalay qorshaynta hawlaha waaxda iyada oo la tixraacayo ujeedooyinka dhaqdhaqaaqa dalxiiska (iyada oo la tixgelinayo isbeddelada qaabka ee ka dhashay xayiraadaha nidaamka gaadiidka).
Kor u qaadista meelaha yar yar: gaar ahaan dalxiiska miyiga iyo dalxiiska dabiiciga ah, hab lagu hormarinayo dalxiiska waara loona dabooli karo ujeedooyinka SDGs “koboc dhaqaale oo waara.”
Ansixinta caqliga "xumbada safarka": suurtagalnimada in si xor ah loogu dhex dhaqaaqo aagag gaar ah (gaar ahaan hab waara oo nabdoon) laakiin mamnuucida marin ka helida bannaanka (tusaale, inta u dhexeysa Lithuania, Latvia, iyo Estonia) - kororka dalxiiska deegaanka.
Yaree ku tiirsanaanta dalabka dalxiiska (iyada oo loo marayo siyaasadda 4S: Joogteyn, Caqli, Takhasus, Istaraatiijiyad). Dib uga fikir dhammaan nidaamka dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka (oo ay ku jiraan safarka dalxiiska).
Noocyada ku hadlayaasha
Prof. Filippo Zagarella waa cilmi-nafsi yaqaan, cilmi-nafsi yaqaan, Dean, iyo macalinka koorsada tababarka ee cilmu-nafsiga bini'aadamka oo leh cinwaanka bioenergetic iyo naqshadeeye aqoon isweydaarsiyo cilmi-nafsiyeed oo loogu talagalay carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweyn.
Prof. Matteo Colleoni waa borofisar buuxa oo cilmiga cilmiga bulshada iyo deegaanka ee waaxda cilmiga bulshada iyo cilmi baarista bulshada ee jaamacada Milano-Bicocca halkaasoo uu sidoo kale ka hayo jagada Maamulaha Dhaqdhaqaaqa Jaamacada iyo Madaxweynaha Koorsada Degree ee cilmiga dalxiiska.